Svika pakuziva iyi nzira nyowani yekutsvaga zvinhu zvinoenderana nemidziyo yako | Linux Vakapindwa muropa
Dzidza nezvenzira iyi nyowani yekutsvaga zvinhu zvinoenderana nemidziyo yako
Kukwidziridza komputa kana laptop pachivanhu zvinokonzeresa matambudziko uye zvikanganiso zvezvikonzero zvakasiyana siyana: dhizaini kusapindirana (mutsauko muzvipset zvizvarwa, Gameplay misiyano uye zvizvarwa zvemidziyo inotsvedza, nezvimwewo), "vendor locks" (inosunga pane mutengesi), kusapindirana kwezvimwe zvinhu kubva kune akasiyana vagadziri (semuenzaniso, Samsung SSDs ine AMD AM2 / AM3 mamaboards), nezvimwe.
Kangani iwe usati wafanirwa kutora kukumbira pfungwa kana kunyangwe kukumbira rubatsiro kubva kune mumwe kuti ugone kuziva kana kuve nereferenzi pane imwe mhando yechinhu chako kana chako chishandiso, izvi kuitira kuti ugone kutenga yakanaka uye kutombove nerombo rakaipa iro rakati chinhu hachisi inowirirana nechikwata chako kune X chikonzero.
Ichokwadi icho yematafura dambudziko rekuenderana harisi hombe kana chokwadi chekuva neimwe njodzi yekuti X Hardware chikamu hachizivikanwe, nekuti mhando yemidziyo iyi inowanzove nemisiyano yakakura uye izvo zvatinovimba nazvo ipurosesa uye mamaboardboard kuti tizive kuenderana.
Asi mune zvinoitwa nemalaptop (malaptop, mabhuku ekunyorera) zvinhu zvinowanzo shanduka uye izvi zvinonyanya kukonzerwa nezvirambidzo zvinosanganisirwa nemugadziri mumidziyo (nei? Ndazvibvunza chinhu chimwe chete ichocho) uye chikamu chikuru izvi zvinorambidzwa zvine chekuita nekugona kweiyo RAM iyo michina inogona kutsigira, kunyangwe iwe kunyepa kunogona kutora zvimwe.
Kubata iyi nyaya yekuenderana ndeyekuti mazuva mashoma apfuura, yakafumura nzira nyowani yekutsvaga zvinhu inowirirana ndiwedzere kombiyuta uchishandisa hw-probe yekushandisa uye dhatabhesi purojekiti inoenderana Hardware Linux-Hardware.org.
Pfungwa iri shure kweiyi yakapusa, sezvo zvakavakirwa pane akasiyana masisitimu ayo vashandisi vanogovana pane imwecheteyo komputa (kana mamaboard) uye nayo tinogona kuziva kuti akasiyana akasiyana zvikamu zvinogona kushandiswa nezvikonzero zvakasiyana: mutsauko mukugadzirisa, kumutsidzira kana kugadzirisa kunoitwa, kuiswa kweimwe michina, nezvimwe.
Naizvozvo kana paine vanhu vaviri vakatumira telemetry kune imwecheteyo komputa modhi, kune mumwe nemumwe wavo unogona kupihwa runyorwa rwezvinhu zvechipiri senzira dzekuvandudza.
Iyi nzira haidi ruzivo rwekutsanangurwa kwemakomputa uye ruzivo rwakakosha rwekuenderana kwezvimwe zvinhu, sezvo zvichingokwana kumushandisi kungosarudza izvo zvinhu izvo zvakatove zvakaiswa uye kuyedzwa nevamwe vashandisi kana vatengesi mune imwechete komputa.
Pane peji rekuenzanisira rekombuta imwe neimwe mudhatabhesi, bhatani re "Tsvaga rinoenderana rekusimudzira" rakawedzerwa kuti uwane Hardware inoenderana.
Naizvozvo, kuti uwane zvinowirirana zvikamu zve X komputa, zvinokwana kugadzira sampuro yacho nenzira yakakodzera kwazvo. Panguva imwecheteyo, mutori wechikamu haangobatsire iye chete, asiwo vamwe vashandisi mukuvandudza michina, vanozotsvaga zvikamu.
Uyewo, zvinokwanisika kushandisa izvi kunyangwe uchishandisa masisitimu anoshanda kunze kweLinuxsezvo inodiwa komputa modhi inogona kuwanikwa mukutsvaga kana sampuli uchishandisa chero Linux USB Live. Iyo hw-probe chirongwa chinowanikwa nhasi pane akawanda maLinux kugovera, pamwe neakawanda BSD masystem.
Maitiro ekuisa uye kushandisa hw-probe?
Kune avo vanofarira kugona kushandisa zvinoshandiswa, sezvataurwa pamusoro apa, hw-probe inowanikwa munzvimbo zhinji dzeLinux uye kana iwe usina iyo yakaiswa, tinogovana pano nzira nhatu kuti ugone kuva nazvo.
Nzira yekutanga yekuisa hw-probe paLinux ndeye kurodha pasi yazvino vhezheni yakagadzika yeAppImage yeizvi, zve izvi isu tichagadzirisa kune inotevera chinongedzo uye isu tichaenda kunotora yazvino vhezheni yakagadzikana.
Kana kurodha pasi kwapera tava kuzovhura terminal, tiri kuenda kunozviisa munzira yefaira uko iyo faira rikatorwa uye tichaenda kunyorera unotevera kuraira tichifunga izvo zvekuona. 1.5 ndiye wekupedzisira akatsiga:
Uye kuziva kuenderana kwehardware isu tinonyora:
Iye zvino imwe nzira iri kuisa iyo flatpak package kubva pane zvinoshandiswa nemutemo unotevera:
Ipo nzira yekupedzisira kuisa zvinoshandiswa iri nerubatsiro rweSnap mapakeji uye tinokwanisa kuisa zvinoshandiswa nekutaipa:
Uye pakupedzisira kuziva kuenderana kwehardware:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Dzidza nezvenzira iyi nyowani yekutsvaga zvinhu zvinoenderana nemidziyo yako
Arch Linux iri nyore kuisa kubva pakuburitsa yako yazvino ISO
Maitiro ekuwana yako AirPort Nguva Capsule ruzivo kubva kuLinux